"Imoto - hhayi ukungcebeleka kodwa ukunyakaza izindlela" - ngakho uthi ukuhlakanipha odumile abalobi "Ithole Legolide" by I. Ilf and Petrov. Abalobi like likhiphe emanzini, futhi iqiniso lokuthi ngisho engu-30 edlule kwakuzoba uphawu lokuthi ukungaguquguquki kanye wedwa, manje ngempela uye edingekayo.
Yiqiniso, kuyinto umbuzo izimoto siqu. Ngokwezibalo, ngo-2013 inani izimoto eRussia zaba amayunithi angaphezu kwezigidi ezingu-50. Lokhu kusho ukuthi cishe esilinganayo, uma kungekhona ukuthi sisebenza kakhulu, abantu banelungelo yokuziqhenya elithi "umshayeli". Yiqiniso, ingxenye enkulu yaleli ezokuthutha bagxila emadolobheni amakhulu, kodwa lokhu neze kuthinta nokudlanga iholide ezifana Suku umshayeli. Ngaphezu kwalokho, izakhamuzi emadolobheni akuyona njalo asiqaphele.
Lapho uSuku umshayeli sika ngokomthetho kugujwa eRussia?
Njengezinye okuningi okumnandi futhi amaholide professional, lolu suku sivunyiwe noma ngabe khona-USSR. idokhumenti yomthetho kuvikela usuku lapho Day umshayeli kufanele kugujwe, wamukelwa Okthoba 1, 1980. Wathi lo iholide, futhi unquma ukuba aligubhe ngonyaka ngeSonto eledlule ngo-Okthoba. EU.SSR isihlakazeka kudala, kodwa isinqumo wasala amandla kusukela ngaleso sikhathi. Ngokwesibonelo, uSuku umshayeli ngo-2013 lugujwe ngo-Okthoba 27.
Futhi kanye Russian yakhe edumile njengoba Ukraine futhi Belarus. Nokho, bahlanganiswa ngalolu suku, abasebenzi ezokuthutha hhayi kuphela, abathandi imishini kanye labo abenza inkonzo izimoto, kodwa futhi abasebenzi umnotho endleleni wemboni. Kodwa kule Russian Federation kulesi sici ngokuqinile zonke. Futhi kwezinye izigaba ukubeka siqu, amaholide abo ngabanye.
Kulokhu okungenhla, sesivele sifundzile, lapho Suku abashayeli. Holiday abasebenzi ejensi endleleni kugujwa ezweni lethu ngasekuqaleni kwesonto, okuwusuku ngeSonto wesithathu Okthoba. Lolu suku has a lunye ezincane eziningi. Kodwa Suku umshayeli kuyiholide jikelele.
Ubani omunye kwasekuqaleni kufanele uhalalisele ngalolu suku?
Uma uphakathi nabangane nabantu obajwayele kunabantu abaye balibangisa ikhaya lesibili, labo chitha beshayela bosuku lwakhe ukusebenza, kwasekuqaleni ngeSonto eledlule Okthoba - lena usuku lwabo. Uma ucabanga empilweni yami ngaphandle ethandekayo "yensimbi ihhashi", leli holide - nezakho, kanye nazo zonke ezinye abanikazi imoto.
Kanti abashayeli izithuthi zomphakathi, yebo, futhi, kufanele uhalalisele ngalolu suku. Kukhona esinye isigaba sabantu ezigubha iholide babo bomsebenzi, Suku uma umshayeli angabhekana siqu yayo - kungcono Mechanics kanye fitters, labo bantu ngaphandle kwabo yensimbi yakho eyodwa ngeke isebenze sengathi kusha.
Lo mkhosi ihlanganisa imikhakha ehlukene yabantu abathanda ezivamile - ijubane emgwaqweni, yebo, ukuduma kwayo injini ngaphansi hood. Futhi manje, kulula ukwazi ukuthi yini usuku umshayeli, ungakhohlwa ukuthi usuku ekwindla ubafisele bendabuko yokushayela "futhi nail noma baton" ngokusuka enhliziyweni.
I eside elindelwe kusihlwa sihlangane
Isenzo phrasal uthole: imithetho, ukusetshenziswa izibonelo futhi abonise ngezimpendulo